Iminyaka engamashumi amathathu nantathu yokuzigqaja – Ubukhosi
Home/ Iphupho le-Afrika/Iminyaka engamashumi amathathu nantathu yokuzigqaja
UNYAKA wezi-2017 uqopha iminyaka engamashumi amathathu nantathu ISILO savuselela uMkhosi woMhlanga namuhla osudume umhlaba wonke ngobuhle, isigqi kanjalo nemiyalezo eyakhayo. Akulona ihaba ukuthi cishe KwaZulu-Natal naseNingizimu Afrika kawukho umkhosi wesintu ohanjelwa ngabantu ngobuningi abaqhamuka kuwo wonke amagumbi amane omhlaba njengoMkhosi WoMhlanga.
Lo Mkhosi omkhulukazi kawugcini nje ngokuletha izimpendulo ezinkingeni esibhekene nazo njengesizwe kepha ubamba iqhaza elimqoka ekusixhumaniseni nendulo lethu. Awukwazi ukuxoxa umlando kanjalo nokubaluleka koMkhosi WoMhlanga ungathintanga umlando waseNkabazwe lapho uZulu nabeNguni badabuka khona. Bukhona ubufakazi obuveza ngokusobala ukuthi lo Mkhosi ungeminye yemidala kakhulu kubeNguni nowaqala amaZulu esazinze eNkabazwe yezwekazi i-Afrika. Uke washabalala lo Mkhosi okwesikhashana ngenkathi uMbuso kaZulu unqotshwa ngamaNgisi kodwa waphinde wavuselelwa ngonyaka we-1984 yiSILO esibusayo.